Maxay ka dhigan tahay in markabku uu calan dal kale ku goosho? - BBC News Somali
Iiran ayaa toddobaadkii hore qabsatay markabka xamuulka qaada ee Stena Impero, kaas oo sitay calanka Ingiriiska - balse waxaa markabkaas lahayd shirkad dalka Sweden laga leeyahay mana saarnayn wax muwaadiniin ah oo u dhashay Ingiriiska.
Balse maxaa sidaas loo yeelaa, yaase faa'iido ku qaba?
Shiinaha: Dad lagu la'yahay maraakiib isku dhacday
Waxaana jira 1,300 oo markab oo Ingiriiska ka diiwaan gashan.
Waxuu tusaale u soo qaatay Giriigga - oo leh maraakiibta caalamka ugu badan. Qaar badan oo ka mid ah maraakiibtaas kuma gooshaan calankiisa, sababtuna waa ayaga oo ka baqanaya in canshuur fara badan laga qaado.
Doonyaha ka diiwaan gashan dalka Panama ayaa malaayiin dollar soo geliyo dhaqaalaha dalkooda.
Nidaamka loo yaqaan "flags of convenience" oo ah in markabku uu qaadan karo calan dal kale oo uu ka diiwan gashan yahay, ayaa lagu dhaliilaa in uu dhibaato ku yahay sharciyada caalmiga ah ee badda.
Lahaanshaha sawirka AFP PHOTO / FREE NAZANIN CAMPAIGN
Simon Bennett, oo ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee maraakiibta (ICS), ayaa sheegaya in mulkiileyaasha maraakiibtu ay ku door bidaan in ay calamo dal kale qaataan sababo la xidhiidha sumcadda dalka ay calankiisa qaadanayaan, iyo in ay tagi karaan dekedda ay doonaan.